Tatitra isan-taona - The Reward Foundation
Home Tatitra isan-taona
Ny Reward Foundation dia natsangana ho toy ny fikambanana Scottish Charities Incorporated Organization tamin'ny 23 Jona 2014. Nosoratana anarana ho SC044948 fikambanana mpanao asa soa izahay amin'ny Office of the Scottish Charity Regulator, OSCR. Ny vanim-potoana fanaovana tatitra ara-bola dia manomboka amin'ny Jolay ka hatramin'ny Jona isan-taona. Amin'ity pejy ity dia mamoaka ny sombin-javatra amin'ny tatitra isan-taona izahay. Ny kaonty feno feno indrindra dia misy ao amin'ny Tranonkala OSCR amin'ny endrika miovaova.
Tatitra isan-taona 2017-18
Nifantoka tamin'ny faritra maro ny asanay
Fanatsarana ny fahaizan'ny ara-bola amin'ny asa soa amin'ny alàlan'ny fangatahana fanampiana sy fanitarana ny varotra varotra
Mampivelatra ny fifandraisana amin'ireo mety ho mpiara-miasa ao Ekosy sy manerantany amin'ny alàlan'ny tambajotra
Manitatra ny fandaharam-pampianarantsika ho an'ny sekoly mampiasa ny maodely siantifika momba ny valisoa valin'ny ati-doha sy ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana
Fananganana profil nasionaly sy iraisam-pirenena hahatonga TRF ho fikambanana 'go-to' azo itokisana ho an'ny olona sy fikambanana mila fanohanana eo amin'ny sehatry ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho fomba iray hampandrosoana ny fahalalan'ny besinimaro ny fananganana faharetana amin'ny adin-tsaina
Manitatra ny fisianay tranonkala sy media sosialy hananganana ny marika eo amin'ireo mpihaino any Ekosy sy manerantany
Fanatanterahana hetsika fanofanana sy fampandrosoana hampisondrotra ny haavon'ny fahaiza-manaon'ny ekipan'ny TRF hahazoana antoka fa afaka mamoaka ireo onjam-piasana samihafa ireo
Nanohy nanararaotra ny fanomezana 'Investing in Ideas' avy amin'ny Big Lottery Fund izahay hamolavola sy hizaha fitaovana ampiasaina amin'ny mpampianatra ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa amin'ny sekolim-panjakana.
TRF dia nanohy nanitatra ny fisiany tamin'ny sehatry ny fanabeazana ara-pananahana, fiarovana an-tserasera ary fanentanana momba ny lozam-pifamoivoizana, nanatrika fihaonambe sy hetsika 12 tany Scotland (taona 5 lasa teo), 3 tany Angletera (taona 5 lasa teo) ary 2 tany Etazonia ary koa tsirairay avy any Kroasia sy Alemana.
Nandritra ny taona dia niara-niasa tamina olona maherin'ny 3,500 2,920 izahay ary nandefa olona tamin'ny fifandraisana sy fiofanana momba ny XNUMX.
Tao amin'ny Twitter tamin'ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny Jolay 2017 ka hatramin'ny Jona 2018 dia nahatratra fahatsapana sioka 174,600 izahay, izany hoe 48,186 tamin'ny taona lasa.
Tamin'ny volana Jona 2018 dia nampidirinay ny tranokala GTranslate, tamin'ny alàlan'ny fandikana ny milina.
Tamin'ny taona dia namoaka fanontana 5 an'ny Rewarding News izahay ary lasa mifanaraka amin'ny GDPR ny lisitry ny mailaka nataonay. Nandritra ny taona dia namoaka lahatsoratra bilaogy 33 izahay momba ny hetsika TRF sy ny tantara farany momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet eo amin'ny fiarahamonina. Ity dia bilaogy 2 hafa noho ny tamin'ny taon-dasa. Nanana lahatsoratra iray izahay navoaka tao amin'ny diary dinihin'ireo mpiara-miasa.
Nandritra ny taona dia nanohy naseho tamin'ny haino aman-jery ny TRF, nipoitra tamin'ny tantaran'ny gazety 21 tany Angletera sy iraisam-pirenena (taona 9 lasa teo) ary koa tamin'ny fahitalavitra BBC any Irlandy Avaratra. Nasongadinay tamin'ny resadresaka tamin'ny radio 4.
Mary Sharpe dia nanohy ny andraikiny amin'ny maha talen'ny Komitim-pifandraisan'ny besinimaro sy ny Advocacy ao amin'ny Society for the Advancement of Sexual Health (SASH) any Etazonia.
Ny Reward Foundation dia nandray anjara tamin'ny valin'ny Green Strategy Consultation an'ny Green UK momba ny fiarovana amin'ny Internet. Nanao fanolorana ihany koa izahay ho an'ny ekipa tetikady fiarovana ny Internet ao amin'ny Departemantan'ny Digital, Culture, Media ary Sport momba ny fanitsiana ny lalàna momba ny toekarena nomerika.
Nahatratra Royal College of General Practitioners Accreditation izahay hanolotra taranja iray andro ho an'ireo matihanina amin'ny fahasalamana ho ampahany amin'ny programa fampandrosoana Professional Professional mitohy. Atrikasa CPD dia natolotra tany amin'ny tanàna 4 UK.
TRF dia nanohy nanolotra fiofanana momba ny fanentanana momba ny sary vetaveta amin'ny Internet amin'ny sekoly, ny matihanina ary ny sarambabem-bahoaka. Niara-nanohana ny programa atrikasa ho an'ny sekoly izahay ho an'ny fampisehoana Wonder Fools The Coolidge Effect ao amin'ny Traverse Theatre.
Ny CEO sy ny talenay dia nanatrika ny fandaharam-panofanana Good Ideas Catalyst tany Edinburgh nandritra ny 3 andro.
Fitaovana sy serivisy nomena
Nanolotra fiofanana maimaim-poana 1,120 olona / ora izahay, teo ambanin'ny 1,165 tamin'ny taon-dasa. TRF dia nanolotra serivisy fiofanana sy fampahalalana maimaimpoana ho an'ireto vondrona manaraka ireto:
Nanolotra ray aman-dreny sy matihanina 310 tamina vondrona vondrom-piarahamonina izahay, nihena hatramin'ny 840 tamin'ny taon-dasa
Ny talen'ny CEO dia nanao fampisehoana teo imason'ny olona 160 tamina mpijery fahitalavitra iray tao amin'ny BBC Irlandy Avaratra. Ny fizarana 10 minitra dia nalefa tao amin'ny Nolan Show, programa avo lenta indrindra any Irlandy Avaratra
Nanolotra olona 908 tamina vondrona matihanina sy akademika izahay tamin'ny fihaonambe sy hetsika tany Scotland, England, USA, Alemana ary Kroasia, hatramin'ny 119 tamin'ny taon-dasa
Nanolotra mpilatsaka an-tsitrapo iray ho an'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izahay ary niara-niasa tamin'ny taranja famolavolana sary izay misy mpianatra 15 mpianatra mandritra ny enim-bolana feno.
Tatitra isan-taona 2016-17
Tamin'ny volana febroary 2017 dia nahazo vola £ 10,000 'Investing in Ideas' avy amin'ny Big Lottery Fund izahay mba hamolavola fitaovana ho an'ny mpampianatra ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa amin'ny sekolim-panjakana.
Nanomboka tamin'ny 1 Jona 2016 ka hatramin'ny 31 Mey 2017, ny karaman'ny CEO dia nanohana tamin'ny alàlan'ny fanomezana avy amin'ny UnLtd Millennium Awards 'Build It' fanomezana £ 15,000 izay aloa aminy manokana.
Mary Sharpe dia nahavita ny fotoana nanendrena azy ho mpitsidika mpitsidika ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge tamin'ny Desambra 2016. Ny fifandraisana tamin'i Cambridge dia nanohana ny fampandrosoana ny mombamomba ny TRF.
Ny CEO sy ny talen'ny famitana dia nanatontosa ny programa Accelerated Social Innovation Incubator Award (SIIA) momba ny fiofanana momba ny fampandrosoana ny orinasa ao amin'ny The Melting Pot.
TRF dia nanohy nanitatra ny fisiany tamin'ny sehatry ny fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy, fiarovana an-tserasera ary fanentanana momba ny lozam-pifamoivoizana, nanatrika kaonferansa sy hetsika 5 tany Scotland, 5 tany Angletera ary ny hafa tany Etazonia, Israel ary Aostralia. Ho fanampin'izany, taratasy telo navoakan'ny mpiara-miasa TRF izay navoaka tao amin'ny diary akademika.
Tao amin'ny Twitter tamin'ny vanim-potoana nanomboka ny Jolay 2016 ka hatramin'ny Jona 2017 dia nampitombo ny isan'ny mpanaraka anay 46 ka hatramin'ny 124 izahay ary nandefa tweet 277. Nahazo fahatsapana bitsika 48,186 izy ireo.
Nifindra monina tao amin'ilay tranonkala izahay www.rewardfoundation.org amin'ny serivisy fampiantranoana vaovao misy haingam-pandeha nohatsaraina be ho an'ny mpampiasa sy ny besinimaro. Tamin'ny volana Jona 2017 izahay dia nandefa ny valisoa Rewarding News, gazety iray izay kendrenay hamoaka farafahakeliny in-4 isan-taona. Nandritra ny taona dia namoaka lahatsoratra bilaogy 31 izahay momba ny hetsika TRF sy ny tantara farany momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet.
Ny zava-bita bebe kokoa
Nandritra ny taona dia nanomboka nisongadina tamin'ny haino aman-jery ny TRF, nipoitra tamin'ny tantaran'ny gazety 9 tany UK ary koa tamin'ny fahitalavitra BBC any Irlandy Avaratra. Nasongadinay tamin'ny resadresaka tamin'ny radio roa be sy tamin'ny horonantsary an-tserasera navoakan'ny OnlinePROTECT.
Niara-nanoratra toko mitondra ny lohateny i Mary Sharpe Ny maodelin'ny fandehanan'ny Internet sy ny fanafintohinana eo amin'ny lahy sy ny vavy miaraka amin'i Steve Davies ao amin'ilay boky 'Miara-miasa amin'ireo olona nanao fahotana ara-nofo: torolàlana ho an'ireo mpampiofana'. Navoakan'i Routogn tamin'ny martsa 2017.
Mary Sharpe dia lasa filohan'ny Komitim-pifandraisan'ny olona sy ny mpisolovava ao amin'ny Society for the Advancement of Sexual Health (SASH) any Etazonia.
Ny Reward Foundation dia nanome valiny tamin'ny consultation an'ny Paikadin'i Scotland amin'ny fisorohana sy famongorana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zazavavy, ny hoavin'ny fandaharam-pianarana manokana momba ny fampianarana manokana sy ny firaisana ara-nofo any amin'ny sekoly Scottish ary ny fanadihadian'ny Parlemanta Kanadiana momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia mahery setra amin'ny tanora.
Ny Reward Foundation dia voatanisa ho loharano misy rohy mankany amin'ny pejin-tranonay ao amin'ny National Action Plan momba ny fiarovana Internet sy ny ankizy ary ny tanora navoakan'ny governemanta Scottish. Nandray anjara tamin'ny ezaka nataon'ny Antoko Parlemantera UK miasa amin'ny Family, Lords ary ny Commons Family & Child Protection Group izahay hanampy amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny toekarena nomerika amin'ny alàlan'ny Parlemanta UK.
TRF dia nanohy nanolotra fiofanana momba ny fanentanana momba ny sary vetaveta amin'ny Internet amin'ny sekoly, ny matihanina ary ny sarambabem-bahoaka.
Nanolotra fiofanana maimaimpoana 1,165 ora izahay, tafakatra 1,043 tamin'ny taon-dasa. Nanolotra serivisy fanofanana sy fampahalalana ho an'ireto vondrona manaraka ireto izahay:
Mpianatra 650 any am-pianarana any Ekosy
840 ny ray aman-dreny sy ny matihanina amin'ny vondrom-piarahamonina
Olona 160 amin'ny mpijery studio TV ao amin'ny BBC Irlandy Avaratra. Ny fizarana 10 minitra dia nalefa tao amin'ny Nolan Show, programa avo lenta indrindra any Irlandy Avaratra
119 amin'ny vondrona matihanina sy akademika amin'ny kaonferansa sy hetsika any Scotland, England, USA ary Israel
Nanolotra toerana an-tsitrapo 4 ho an'ny mpianatra sy ny oniversite izahay.
Tatitra isan-taona 2015-16
Fanatsarana ny fahaizan'ny ara-bola amin'ny asa soa amin'ny alàlan'ny fangatahana fanampiana ary manomboka varotra ara-barotra
Mampivelatra ny fifandraisana amin'ireo mety ho mpiara-miasa ao Ekosy amin'ny alàlan'ny tambajotra
Fananganana programa fampianarana ho an'ny sekoly mampiasa ny maodely siantifika momba ny valisoa valin'ny ati-doha sy ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana
Ny fananganana profil nasionaly sy iraisam-pirenena hahatonga TRF ho fikambanana 'go-to' azo itokisana ho an'ny olona sy ny fikambanana mila fanohanana amin'ny sehatry ny pôrnôgrafia amin'ny Internet manimba toy ny fomba iray hampitomboana ny fahalalan'ny besinimaro ny fananganana fiaretana amin'ny adin-tsaina
Manitatra ny fisianay tranonkala sy haino aman-jery sosialy hananganana ny marika eo amin'ireo mpihaino any Ekosy sy manerantany
Ny fangatahana nahomby dia natao ho an'ny UnLtd ho an'ny loka "Build It" vola 15,000 2016 £ hanome an'i Mary Sharpe karama mandritra ny herintaona hatramin'ny volana jona 2016. Vokatr'izany tamin'ny volana Mey XNUMX dia nametra-pialana i Mary tamin'ny naha mpiadidy asa soa azy ary nifindra ho anjara asan'ny Chief Mpanatanteraka. Dr Darryl Mead dia nofidian'ny Birao ho filoha vaovao.
Nitarika ny asa i Mary Sharpe mba hampivelarana tambajotran'ireo mpiara-miasa mety hiasa. Ny fivoriana dia natao niaraka tamin'ny solontenan'ny fonja tsara, ho avy tsara?, Fikambanan'ny fampianarana katolika Scottish, fahasalamana ara-nofo Lothians, fanajana ara-pahasalamana NHS Lothian, filankevitry ny tanànan'i Edinburgh, hetsika ara-pahasalamana Scottish momba ny olan'ny alikaola sy ny taonan'ny dadany.
Mary Sharpe dia notendrena ho mpitsidika mpitsidika ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge tamin'ny Desambra 2015. Darryl Mead dia notendrena ho mpikaroka mpikaroka Honorary ao UCL. Ny fifandraisana amin'ireo oniversite ireo dia nanohana ny fampandrosoana ny mombamomba ny TRF.
Mary Sharpe dia nahavita ny fampiofanana nataony tamin'ny alàlan'ny programa Social Innovation Incubator Award (SIIA) tao amin'ny The Melting Pot. Nanatevin-daharana ny programa SIIA Hafainganana izy avy eo, niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny Birao Dr Darryl Mead.
TRF dia namolavola toerana teo amin'ny sehatry ny fiarovana an-tserasera sy ny sehatry ny fiatraikany amin'ny pôrnôgrafia, nanatrika ireo kaonferansa 9 UK.
Ireo taratasy nosoratan'ny mpikambana TRF dia nekena ho aseho ao Brighton, Glasgow, Stirling, London, Istanbul ary Munich.
Tamin'ny volana febroary 2016 izahay dia nandefa ny Twitter feed @brain_love_sex ary nanitatra ny tranokala 20 ka hatramin'ny 70 pejy. Noraisinay ihany koa ny fitantanana ny tranokala avy amin'ireo mpamorona.
Niara-nanoratra toko mitondra ny lohateny i Mary Sharpe Ny maodelin'ny fandehanan'ny Internet sy ny fanafintohinana eo amin'ny lahy sy ny vavy miaraka amin'i Steve Davies ao amin'ilay boky 'Miara-miasa amin'ireo olona nanao fahotana ara-nofo: torolàlana ho an'ireo mpampiofana'. Navoakan'i Rout2017 tamin'ny Febroary XNUMX.
Mary Sharpe dia voafidy tao amin'ny biraon'ny Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-nofo (SASH) any Etazonia.
TRF dia nanolotra valiny tamin'ny Enquiry an'ny Senat Aostralianina ho an'ny Loza natao tamin'ny ankizy aostralianina tamin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ary amin'ny fakan-kevitra ataon'ny governemanta UK amin'ny Aterineto momba ny fiarovana ny zaza: fanamarinana ny taona amin'ny pôrnôgrafia.
Nanomboka nanolotra fiofanana momba ny fanairana momba ny sary vetaveta amin'ny Internet any amin'ny sekoly Scottish izahay amin'ny lafiny ara-barotra.
TRF dia nahazo fanampiana 2,500 £ ho famatsiam-bola ho an'ny famoronana tranokala lehibe ho an'ny tanora. Izy io dia hiara-hiasa amin'ireo tanora nalaina avy tamin'ny mpihaino kendrena.
Nanolotra fiofanana maimaimpoana 1,043 643 ora izahay raha oharina amin'ny XNUMX tamin'ny taon-dasa.
Nanolotra serivisy fanofanana sy fampahalalana ho an'ireto vondrona manaraka ireto izahay:
Mpampianatra miisa 60 momba ny fiofanana momba ny asa fanompoana ho an'ny filankevitra Edinburgh
Mpiasan'ny fahasalamana ara-pananahana 45 an'ny NHS Lothian
Mpilalao 3 ho an'ny Wonder Fools ao Glasgow
Mpikambana 34 ao amin'ny National Association for the Treatment of Abusers
Solontena 60 ao amin'ny Konferansa Protect an-tserasera any Londres
Solontena 287 ao amin'ny Kongresy Iraisam-pirenena amin'ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia ao Istanbul, Torkia
Mpanakanto sy mpianatra zavakanto 33 ao amin'ny Royal College of Art any London
Mpikambana 16 ao amin'ny The Melting Pot, miaraka amin'i Dr Loretta Breuning
Mpiasa 43 ao amin'ny ivon-toerana ara-pahasalamana momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Chalmers any Edinburgh
Solontena 22 tao amin'ny Konferansa DGSS momba ny fikarohana ara-nofo ara-nofo siantifika ara-tsosialy any Munich, Alemana
Mpianatra 247 ao amin'ny sekolin'i George Heriot any Edinburgh Nanolotra toerana an-tsitrapo 3 ho an'ny mpianatra sy ny anjerimanontolo izahay.
Tatitra isan-taona 2014-15
Andian-dahatsoratra an-tsary natao ho an'ny mpihaino laika no novolavolain'i Mary Sharpe sy Darryl Mead izay mamaritra ny fomba fiasan'ny valisoa valisoa ao amin'ny ati-doha. Ity dia nandinika ny fizotry ny fiankinan-doha, nanazava ny fanentanana tsy mahazatra ary nanisy antsipiriany ny fomba ahafahan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet lasa fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Ny mpihaino tratra dia aseho etsy ambany. Mary Sharpe dia niresaka tamina mpiasam-panjakana 150 teo ho eo miasa ho an'ny governemanta Scottish.
Nanaiky ny lalàm-panorenana ny Birao.
Nanaiky ny tompon'andraikitra ny birao.
Dia nanaiky ny drafi-pandraharahana ny Birao.
Ny kaonty amin'ny banky mpitahiry vola dia natsangana tsy andoavam-bola miaraka amin'ny Banky Scottish lehibe.
Nekena ny mari-pamantarana sy sary famantarana orinasa voalohany.
Nisy ny fifanarahana napetraka ho an'ny fiandrianan'ny boky Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha homen'ny mpanoratra ny The Reward Foundation. Voaray ny fandoavana ny mpanjaka voalohany.
Mary Sharpe amin'ny maha Chair dia nahazo ny loka tamin'ny fandaharam-pampiofanana Social Innovation Incubator Award (SIIA) ao amin'ny The Melting Pot. Ny loka dia nahitana herintaona nampiasana malalaka ny habaka amin'ny The Melting Pot.
Nahazo 300 pounds i Mary Sharpe ho an'ny The Reward Foundation tamin'ny fifaninanana fiakarana SIIA.
Mary Sharpe dia nangataka ary nahazo valisoa £ 3,150 tamin'ny famatsiam-bola haavo 1 avy amin'ny FirstPort / UnLtd hahafahantsika manangana tranokala mahomby. Ny vola azo tamin'ity loka ity dia tsy nahazo raha tsy tamin'ny taona ara-bola manaraka.
Nisy orinasam-barotra natao hampivelatra ny tranokala sy sary sokitra be pitsiny kokoa.
Nanome fiofanana maimaim-poana 643 ora izahay.
Niofana ireto matihanina manaraka ireto izahay: mpiandraikitra fahasalamana 20 ho an'ny NHS Lothian, tontolo andro; 20 ireo mpitsabo amin'ny fahasalamana ao amin'ny Lothian & Edinburgh Abstinence Program (LEAP) mandritra ny 2 ora; 47 matihanina amin'ny fitsarana heloka bevava ao amin'ny Fikambanana Scottish amin'ny Fandinihana ny fanafintohinana mandritra ny ora 1.5; Mpitantana 30 ao amin'ny Institution Polmont Young Offenders mandritra ny 2 ora; Mpanolotsaina 35 sy manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny zaza ao amin'ny sampana Scottish an'ny National Association for the Treatment of Abusers (NOTA) mandritra ny 1.5 ora; Mpianatra kilasy faha-200 ao amin'ny Sekolin'i George Heriot mandritra ny 1.4 ora.
Nanolotra toerana an-tsitrapo 3 ho an'ny mpianatra sy ny oniversite izahay.